केन्द्रीय बैंकले २ अर्बको नागरिक बचतपत्र बिक्री गर्ने, ब्याजदर कति ? - नेपालबहस
केन्द्रीय बैंकले २ अर्बको नागरिक बचतपत्र बिक्री गर्ने, ब्याजदर कति ?
| १६:००:०१ मा प्रकाशित
१० जेठ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको ‘नागरिक वचतपत्र २०८३ विक्री गर्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकले पाँच वर्षे अवधिका लागि वार्षिक ९ प्रतिशत ब्याजदरमा (ब्याजकर लाग्ने गरी) नागरिक वचतपत्र विक्रीका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको हो ।
बचतपत्रमा जेठ ११ गतेदेखि असार १ गतेसम्म बोलपत्र पेश गर्न सकिने छ । जसको निष्काशन असार ६ गते गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बचतपत्रको सावाँ फिर्ता २०८३ असार ६ गते हुने छ ।
प्रत्येक छ महिनामा व्याज दिइने उक्त बचतपत्र खरीद गर्न घटीमा १० हजार र बढीमा कुल निष्काशित रकमको सीमा नबढाई १० हजारले निःशेष भाग जाने अंक बराबरको रकमको लागि आवेदन दिन पाइनेछ ।
उक्त वचतपत्र नेपाली नागरिकले मात्र खरीद गर्न पाउनेछन् । आफुलाई पायक पर्ने वाणिज्य बैंकहरू,बजार निर्माताको इजाजतपत्र लिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यालयहरूबाट बचतपत्रको व्याज लिन सकिनेछ ।
सो वचतपत्र धितो राखी राष्ट्र बैंकबाहेक अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन सकिने छ।
ज्यानमारा भाइरसले लियो भारतका धावक मिल्खा सिंहको ज्यान ६ दिन पहिले
अध्यक्ष कप भलिबल प्रतियोगिताको बजेटमा विवाद, गाउँपालिकामा तालाबन्दी २ दिन पहिले
सिरहामा ज्वरोको प्रकोप,परीक्षण गर्न जादैनन् स्थानीय ३ हप्ता पहिले
नेपालमा कोरोना फैलाउने डेल्टा भेरियन्टमा नयाँ म्युटेसन पुष्टि ४ दिन पहिले
उद्धार र राहतको प्रभावकारी व्यवस्था गर्न पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको आग्रह १ हप्ता पहिले
पहिरोका कारण पर्वत–बागलुङ खण्ड गए रातिदेखि अवरुद्ध १ हप्ता पहिले
जटिल समस्या भएका संक्रमित निको हुँदै ४ हप्ता पहिले
युनियन हाईड्रोपावरको शेयर खरिद माग उच्च ३ हप्ता पहिले
अब ओत लाग्ने ठाउँ कहाँ खोज्नु मन्त्रीज्यू ? १ वर्ष पहिले
आईजीपीको नीतिलाई नै माथ खुवाउने न्यापाने र गिरि को हुन् ? ८ महिना पहिले
ललितपुरमा कर्फ्यु लगाउने रथको अवस्था (फोटो/भिडियो) १० महिना पहिले
कोभिड–१० को सङ्क्रमण रोक्न जोर्डनमा कफ्र्यू १ वर्ष पहिले